देशभर मौसम बद्ली को सम्भावना : तीन दिनसम्म लगातार पानी पर्ने – Sandesh Press
November 14, 2021 1289
उपत्यकासहित देशभरको मौसम बद्ली भएको छ । हिजोसम्म आकाश सफा रहे पनि आज बिहानदेखि मौसम हल्का बद्ली भएको हो ।
वायुमण्डलमा पश्चिमी वायुको जाडोयाम सुरु भएको र मौसममा आंशिक बद्ली भएको मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार मौसम बद्ली भए पनि पानी नपर्ने तर अबको तीन दिनसम्म मौसम यस्तै रहनेछ । बिहान र बेलुका मौसम धुम्मिएर चिसो महसुस हुने गरेको भए पनि दिउँसोपख घाम लाग्ने मौसमविद्मा नन्धरले बताउनुभयो ।
केही ठाउँमा कुहिरो लाग्नेछ । अरु ठाउँमा भने सामान्यतया मौसम सफा नै रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल??? क्लिक गर्नुहोला ****काठमाडौं- बलिउड अभिनेता तथा निर्देशक महेश माञ्जरेकरले अभिनेता सलमान खान बाहिर जति खुसी देखिन्छन्, भित्र भने एक्लोपनबाट पीडित रहेको खुलासा गरेका छन् । पछिल्लो समय ‘अन्तिम’ फिल्ममा सलमानलाई निर्देशन गरेका माञ्जरेकरले हालैको एउटा अन्तर्वार्तामा धेरै कुरा खोलेका छन् ।
बिहेको प्रसङ्ग आउँदा अनेक कुरा गरेर टार्ने गरेको भए पनि एक समय भने सलमान बिहेको मुडमा पुगेका थिए । उनी र तत्कालीन मोडल संगीत बिजलानीबीच सन् १९८६ देखि अफेयर चलेको थियो । करिब दश वर्ष उनीहरू सम्बन्धमा रहे । त्यतिबेला सलमान र संगीताबीच बिहे हुन लागेको, निम्तो कार्डसमेत छापिएको खबर आएको थियो । तर, कुनै कारणवस उनीहरूबीच बिहे हुन सकेन । त्यसपछि सलमानको नाम थुप्रै हिरोइनहरूसँग जोडियो ।न्युज कारखाना
Prevबाहिर खुसी देखिए पनि भित्र एक्लो छन् सलमान खान, एसी बन्द गरेर ड्रोइङ रुमको सोफामा एक्लै टोलाएर बस्छन्
Nextजितु नेपाललाई फुलनदेकी आमाको जवाफ, आफ्नै सासले त धोका दिन्छ यहाँ कसको विश्वास गर्नु ? (भिडियो हेर्नुस्)